Enlarge Font: စာသားကိုချဲ့ပါ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » Enlarge Font: ပိုကြီးတဲ့စာလုံး၊
Enlarge Font: စာသားကိုချဲ့ပါ၊ ပိုကြီးသောဖောင့် APK
👉👉👉 သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်သေးငယ်သောစာလုံးများ၏ပြofနာများကိုသင်ရင်ဆိုင်နေရပြီးသင်လိုချင်သည် စာသားအရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲပါ?
ဒါမှမဟုတ်စာလုံးအရွယ်အစားဟာပုံမှန်ဖြစ်ပေမယ့်မကြာခဏတွေ့ရလို့လွယ်ကူစွာတွေ့နိုင်ပါတယ် ပိုကြီးတဲ့ဖောင့် သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင်။
သို့မဟုတ်သင့်တွင်မျက်စိပြissueနာရှိနေပြီးသင်လိုချင်ကောင်းလိုလိမ့်မည် ဖောင့်ချဲ့ပါ သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းပေါ်မှာ။
above အထက်ပါပြproblemsနာများအားလုံးကို ONE CLICK ကဒီအက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ဖြေရှင်းပြီးသင်အပြည့်အဝလုပ်နိုင်ပါတယ် စာသားအရွယ်အစားပြောင်းပါ?
စာလုံးကြီး ဖောင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲပါ Android OS ရှိစာသားနှင့်နံပါတ်များကိုပိုမိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်မြန်မြန်ဖတ်နိုင်ရန်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူများအားကူညီရန်ထုတ်လုပ်သည်။ ဖောင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲပါ သင်၏စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် 50% မှ 240% (2.4x ပိုကြီးသော) သို့စနစ်ဖောင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲရန်ကူညီရန်ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီအခမဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်!
🍀ခွင့်ပြုချက် ဖောင့်ချဲ့ပါ 50% မှ 240% အထိအရွယ်အစား
default ပုံမှန်စာလုံးအရွယ်အစား (100%) ကိုတစ်ချက်တည်းဖြင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
ရချင်တယ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအားလုံး tool ကိုချဲ့ သူတို့နှင့်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေမျိုးများအတွက်ဖောင့်သည်ဤတွင်အကောင်းဆုံးအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းရှိသည်။
Big Bigfont ကိုဖွင့်ပါ (ဖောင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲပါ)
big စာလုံးကြီးကြီးရွေးရန် "Aplly" ကိုနှိပ်ပါ
Yes သက်သောင့်သက်သာပြောင်းရန်“ Yes” ကိုနှိပ်ပါ
🍀ယခုသင့်တော်သောအရွယ်အစားရှိစာလုံးကိုတပ်ဆင်လိုက်ပြီ။ သငျသညျ bigfont ပိတ်လိုက်တယ်
🍀ကောင်းပြီ။ device ကို reset နှင့် ပိုကြီးသောဖောင့် ယခုသင့်ဖုန်းပေါ်တွင်ပေါ်လာ!
သင်လုပ်သမျှအားလုံးသည်တစ်ကြိမ်ထိဖြစ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ ဖောင့်အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲပါ ကြွင်းသောအမှုကိုပြုလော့။
အဆင့်မြှင့်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို v1.5.0 -
★ Android9(Android P) ဖြင့်စာလုံးကြီးကြီးကိုထောက်ပံ့သည်။
★ bug နှင့် app အမြန်နှုန်းကိုပြုပြင်ပါ
★ ON / OFF setting ကိုအကြောင်းကြား
★ App သိုလှောင်မှုကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါ
★ Android7& 8 တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်
★ 99.9% ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များကိုထောက်ပံ့ပါ
Enlarge Font: ပိုကြီးတဲ့စာလုံး၊
Wifi Hotspot အဖွဲ့နှင့်မြန်မြန်အားသွင်းခြင်းစတူဒီယိုများ
အားသာချက်များ & ...
အရောင် Glow: ...